Sida loo isticmaalo Command Q shortcut si aad isaga joojiso apps-ka iPadka [Pro tip] | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida loo isticmaalo gaaban Command Q si loo joojiyo abka iPadka [Pro tip]
Sida loo isticmaalo gaaban Command Q si loo joojiyo abka iPadka [Pro tip]
Haddii aad waligaa waqti ku qaadatay macOS, waxaad u badan tahay inaad isku dayday inaad isticmaasho kumbuyuutarkeeda caanka ah ee Command+Q si aad uga baxdo apps-ka iPad-ka - kaliya inaad ogaato inaysan waxba qaban. Laakiin si sax ah uma isticmaaleysid.
Waxa jira khiyaamo kuu ogolaanaysa inaad isticmaasho gaab-bankan si aad dhakhso ugu xidho abka iPadOS, iyo tilmaantan pro, waxaanu ku tusi doonaa sida.
Jidadka gaaban ee kiiboodhka waxa loo nashqadeeyay inay nolosheena ka dhigaan wax yar fudud. Waxay kaa caawin karaan inaad u dhex marato abka, kicin hawlaha caadiga ah, iyo qaar kaloo badan. Laakiin sidoo kale waxay noqon karaan jahawareer.
Haddii aad si joogto ah u isticmaashid aalado badan oo Apple ah, sida Mac iyo iPad-ka, waxaad ogaan doontaa in keyboard kasta oo gaaban oo aad u isticmaashay desktop-ka uusan u shaqayn sidii loogu talagalay gudaha iPadOS.
Mid ka mid ah kuwan waa Command + Q, kaas, oo ka duwan kan macOS, aan loo isticmaali karin in laga baxo app oo lagu soo celiyo shaashadda guriga ee iPadka. Waxaa jira hab kale oo loo isticmaalo si loo xiro abka iPadOS, si kastaba ha ahaatee.
Sida loo isticmaalo Command+Q shortcut gudaha iPadOS
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad furto Command+Tab switcher app, ka dibna ka xidh abkaaga halkaas. Raac tillaabooyinkan:
Hayso Taliska (Cmd) fur, kadibna taabo Tab furaha furaha furaha app-ka
Hoos u wad Command adigoo garaacaya Tab ilaa aad iftiimiso app-ka aad rabto inaad xidho.
Iyadoo wali haysa Command, riix Q in la xiro barnaamijka.
Xiritaannada abka ee habkan ayaa saameyn la mid ah tan ku dhejinta abka ku jira iPadOS aragtida hawl-qabadka badan. Waxay la macno tahay xog kasta oo lagu kaydiyo xusuusta waa la tuuray, abka wuxuu soo kicin doonaa marka dib loo furo.
5 Nooc oo ah Arimaha WooCommerce in la daawado
Qora hagaha dul-saarista iyo astaanta astaanta: geesiyaasha aan la heesin ee guusha suuqgeynta nuxurka [Muuqaal]